Momba anay - Tangshan Jidong Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd.
Tangshan Jidong Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd dia orinasa miompana amin'ny famokarana feno, iarahan'i Tangshan Jidong Equipment & Engineering Co., Ltd ary Tangshan Jidong Cement Co., Ltd. Io no sehatra fampiantranoana ny fampidirana rafitra. , fitantanana ifotony ary fampidirana integrative ny loharano anatiny ao amin'ny Jidong Development Group. Ny orinasa dia manana traikefa fanamboarana fitaovana an-jatony taona ary traikefa fikojakojana maherin'ny 30 taona ho an'ny tsipika famokarana simenitra vaovao.
Ny orinasa fototra dia mandrakotra ny kojakoja simenitra sy ny famatsiana ny kojakoja, ny fikojakojana ny fitaovana sy ny kojakoja fanampiny, ny fanavaozana ara-teknika sy ny fepetra, ny fikirakirana sy ny fikojakojana ny tsipika famokarana, ny consultancy fitantanana sns mba hanomezana vahaolana maharitra ho an'ny mpanjifa.
Toeram-pivarotana telo ：
Sehatra serivisy 1.e-varotra
2.Varotra an-tserasera ho an'ny vokatra manara-penitra
Vahaolana 3.Custom amin'ny vokatra matihanina, tetikasa fikojakojana ary serivisy teknika
4. Mizarà lisitr'ireo orinasa tsy miankina.
ny foibe dia manome serivisy fanaraha-maso ho an'ny fitaovana hampihenana ireo lesoka vonjy taitra eo an-toerana, ary hampitomboana ny fitoniana eo amin'ny fitaovana.
Ireo orinasa valo dia eto ambany:
Ekipa teknika matihanina ：
1.system calibration ho an'ny tsipika famokarana
2. fanaraha-maso vibration,
3. fanaraha-maso tsy mitongilana,
4. fanandramana sy famakafakana ny rano
5. fanandramana fananganana ifotony,
6.tsikaritra ny toetr'andro
7. fanaraha-maso motera
8. fanandramana mavitrika sy mijanona amin'ny lafaoro rotary.
1. Mpanadihady hovitrovitra iraisam-pirenena telo an'ny ISO
2.Telo, injenieran'ny NDT
3.32 injeniera elektrika, mekanika, fizotra, famokarana herinaratra ary injeniera sivily
4.Ny ivon-toeram-pamokarana fitaovana - Mba hanamboarana ireo fitaovana finday sy compresseur rivotra.
5.Maintenance, Storage, Training.
6. Ivon-kevitra ara-teknika momba ny teknika- Hanao asa fanoloran-tena, manome tahiry fanondranana sy consultation teknika matihanina
tetikasa fototra dimy
1.Kiln varingarina velarana tetikasa fampiasana hafanana
Ny orinasanay dia nifantoka tamin'ny fikarohana an-tsena ary nahavita ny volavolan'ny mpanangona hafanana mamirapiratra amin'ny lazan'afo mba hanome herinaratra, fanafanana rano fandroana ary fanafanana amin'ny ririnina. Azontsika atao ny manadihady sy mamolavola tranokala mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa hanome serivisy modular sy tsirairay ho an'ny mpanjifa.
Indrindra amin'ny lafiny famokarana herinaratra ， Ny orinasanay dia mampiasa teknolojia famokarana hafanana hafanana ambany hafanana. Ity haitao ity dia mampiasa mivantana ny hafanana ambany amin'ny hafanana ambany izay nidina avy tao amin'ny fidiran'ny lafaoro sy ny famoahana ny lafaoro hamokarana angovo herinaratra. Tsy misy fanjifana solika ary tsy misy fandotoana mandritra ny famokarana herinaratra. Teknolojia famokarana herinaratra maintso misy tombony lehibe ara-toekarena, madio sy maintso izy ity, izay manaraka ny politika madio sy mamonjy angovo an'ny governemanta. Izy io dia manana habaka sy fanantenana manatsara.
Ny tombony azo amin'ny tetikasa:
1 、 Ny singa ampangatsiahina amin'ny rano dia mampiasa teknolojia fanamafisam-peo, izay mety hampiasa hafanana avo lenta mba hampiroboroboana ny tombony ara-toekarena napetraky ny generator.
2, ny vina AQC dia karazana mitsangana. Izy io dia fampitaovana pre-deduster (efitrano fandaminana) alohan'ny boiler mba hampihenana ny vovoka miditra amin'ny vilany.
3 、 PH boiler dia karazana marindrano, mampiasa boiler paompy etona mivezivezy an-keriny; Ny tombony iray dia ny fampihenana ny fametrahana ny vovo-tany amin'ny faritra fanafanana ary ny tombony hafa dia ny fampihenana ny isan'ny fitaovana fitetezana, ary ny fampihenana ny fivoahan'ny rivotra amin'ny rafitra.
4 、 Ny rafitra fanaraha-maso nozaraina dia mandray ny rindrambaiko sy ny rindranasan'ny orinasa manerantany. Mandroso sy azo ianteherana izy io.
Tetikasa rafitra logistika 2.Intelligent - mampiasa fifehezana isa sy haitao amin'ny karatra hendry hanatsarana ny fahombiazan'ny fanaterana entana betsaka sy hampihenana ny hadisoan'ny olombelona.
3. Tetikasa rafitra fanondranana lafaoro sy lafaoro - mampiasa tamba-jotra neural, famantarana ny maodely ary teknolojia malefaka, modely fanaraha-maso modely mifangaro modely hanoloana ny fiasa artifisialy, mahatsapa fanaraha-maso mandeha ho azy ary mahatratra ny tanjon'ny kalitao milamina, habetsaky ny fatra, fitsitsiana arintany, fitsitsiana herinaratra ary fanatsarana ny fahaizan'ny famokarana amin'ny fanjakana miasa ao amin'ny kilaometatra maharitra.
4. Tetikasa rafitra fitantanana energie- manangona, manadihady, manara-maso ary mitantana ny angona antonony angovo amin'ny alàlan'ny fametrahana ny sehatry ny rafitra fitantanana angovo mba hahatratrarana tanjon'ny fihenan'ny angovo sy ny famoahana ny entona.
5.Machines manolo ny olona amin'ny toerana lehibe-maka zavamaniry manan-tsaina ho toy ny tanjon'ny tanjona, mampiasa robot amin'ny asa be risika. Ankehitriny dia tetikasa 5 R&D no voamarina fa hikaroka.
①Misolo robot manamboatra kitapo
②Solo ny kitapo artifisialy ampidiro amin'ny packer automatique
Robot Robot "Snowman" manadio ho an'ny cooler grama
④Avao ny fiasa artifisialy amin'ny robot fanadiovana sy fanodinana volo preheater
⑤Solo ny fanadiovana trano fanatobiana entana amin'ny robot fanadiovana
Fitaovana sy faritra iva
Vertical mill (milina mitsangana manta, simenitra mijidina simenitra, fikosoham-bary mitsivalana), lafaoro rotary, cooler vita amin'ny grama ary roller press sns. Ireo noforonin'ny vondrona mivarotra orinasa dia afaka mamaly ny fangatahan'ny 2500-10000tpd ho an'ny tsipika famokarana simenitra dingana vaovao .
Niara-niasa tamin'i Alemana Siemens Company sy Zhejiang Central Control Co., Ltd, ny orinasa dia namolavola sy namokatra rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy ny indostria teknika, rafitra diagnostika manam-pahaizana momba ny kilaometatra rotary, OTS fanahafana ny rafitra fiofanana ary ny rafitra fitehirizana angovo.
Ny orinasa dia mandray ny haavon'ny masinina haondrana mba hamokarana hazakazaka fanoherana tsy mahazaka, hafanana ary tsy harafesina, izay afaka mamaly ny fangatahan'ny 2500-10000tpd ho an'ny tsipika famokarana simenitra dingana vaovao.
Niara-niasa tamin'ny vondrona CN Gpower Gearbox Co., Ltd ary NGC, nanangana ivon-toerana fikojakojana boaty ilay orinasa mba hanomezana vahaolana amin'ny fanamboarana boaty matihanina ho an'ireo orinasa indostrialy.
"Win-win" no tanjon'ireo mpikambana ao amin'ny JIDONG-tsika. Manantena ny fiaraha-miasanay tokoa izahay!